Mwedzi mitanhatu neArco Linux, sarudzo yakanakisa yekuyedza Arch Linux uye usafe uchiedza | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi mitanhatu neArco Linux, sarudzo yakanakisa yekuyedza Arch Linux uye usafe uchiedza
Nhasi Ini ndakagovana pano pa blog gwara nyore rekuti ungaisa sei Arco Linux pamakomputa edu. Ichi chi kugoverwa kweLinux kunoenderana neArch Linux, asi izvo zvine edhisheni ine akasiyana desktop mamiriro uye kuti kusiyana neArch Linux, Arco Linux ine graphical yekumisikidza nzira inotsigirwa ne "squid" yekuisa wizard.
Nenzira iyi avo vane chinangwa chekuyedza Arch Linux, asi wanzwa kana kuona nzira yayo yekumisikidza iri kuburikidza netambo yekuraira, ivo vanozogona kuve neArch Linux pamakomputa avo vasingatyi kuisa njodzi ruzivo yemakomputa ako kana kungo sakwanisa kuisa system.
1 Nei Arco Linux uye kwete Arch Linux kana chimwe chinobva?
1.1 Kuenda kuWindows kuenda kuLinux kutama
Nei Arco Linux uye kwete Arch Linux kana chimwe chinobva?
Muchiitiko chekutanga, chikonzero nei ndafunga kuisa Arco Linux uye kwete Arch Linux kana chimwe chinobva imhaka yenguva yekumisikidza inodiwa neArch Linux iyo iwe yaunotsaurira uye kunyanya kuitira maitiro ehurongwa hwako.
Kunze kwaizvozvo panguva iyoyo yaive neWindows 10 kuisirwa uye zvaida kutora komputa yangu. Asi nekuda kwekukanganisa kwangu apo ndichichengetedza kutsva kwangur yangu HDD yakadonha uye zvakakonzera dambudziko reposvo iyo Mahwindo aifungidzira kuita chando maminetsi mashoma mushure mekutanga uye ini ndanga ndatodzoreredza iyo system kanenge katatu.
Ini ndaive neimwe chikamu neUbuntu 18.04 uye neLinux ndakanga ndisina dambudziko Dambarefu rangu rinoshanda nemazvo kusvika parinhasi, (kutaura chokwadi handizive kuti sei).
Kana zviri zvekuiswa kweArch Linux, kekutanga nguva yaunozviita zvinogona kutora maawa, asi zvinotevera kuiswa zvinogona kudzikiswa kusvika pasi pe1 awa (izvi zvinoenderana zvakanyanya neinternet yako yekubatanidza).
Mushure mekumisikidzwa kweArch Linux, iyo nguva yezvokwadi inouya sezvo uripo kana iwe inguva yekudyara imwe nguva shoma kune iyo yekumisikidza graphical server uye nharaunda, uyezve, iyo yekugadzirisa yako system.
Ichi ndicho chikonzero ini ndinorasa zvachose kuisirwa Arch Linux. Dzimwe sarudzo hadzina kundikurudzira nekuti Manjaro panguva iyoyo aive achiri nematambudziko avakange vasingakwanise kugadzirisa uye nezveAntergos, vazhinji venyu muchaziva kuti akafa.
Kune rimwe divi, sekusarudza kumwe kugovera kweLinux, mukati mezvandaida zvaive.
Iyo sisitimu isingade zvinongedzo, ndiko kuti, Rolling-Kuburitsa modhi
Kuti iwe une huwandu hukuru hwekushandisa mune ako repos uye kudzikisira kushandiswa kwezvekunze zviwanikwa.
Kurumidza kumisikidza, kutaridzika uye kwete kushandisa zvisina basa zviwanikwa zvakawanda.
Kana iyo system ikatyoka, ita kuti nzvimbo yacho igone kugadzirisa dambudziko pasina kukanganisa data kana mune yakaipa kesi iyo system.
Izvo zvinondidzivirira kuti ndive nematambudziko nekutsamira pakati pezvishandiso zvakasiyana.
Uye ndosaka zvichibva pane zvinongedzo 4 ne5 yakabva kuArch Linux yaive yangu sarudzo.
Kuenda kuWindows kuenda kuLinux kutama
Mushure mekumisikidzwa muyedzo waizouya, sezvo ini ndaifanira kushanda nekombutar nekuti yaida zviitiko zvakasiyana (hapana chakakosha), kupi vazhinji vanogona kuvaisa sezviitiko zvemuhofisi.
Nyaya yekutanga ndeye kushanda nehofisi suite, kwazvino Libreoffice yakafukidza zvandinoda, pakati pemabasa andaifanira kuita muboka nevandaidzidza navo uye izvo zvakazoguma nekuvazadzisa neinternet edition yeMicrosoft Office kwataigona kushanda munguva chaiyo pazvinyorwa.
Nezve maprinta, iyo yekugadzirisa yaikurumidza uye yaisada chero kudhanilodha. Zvakanaka neCUPS maitiro haatore anopfuura maminitsi matatu uye kugovana nemamwe zvikwata zviri nyore tora iyo google gore kudhinda sevhisi.
Pane chikamu chekugadzirisa mufananidzo zvaisada hombe dhiri, ini ndaimboshanda ne Photoshop. Asi muLinux ini ndanga ndatoziva kwenguva yakareba choko uye izvo kubva mumaonero angu inzira yakanaka kwazvo maererano nemashandiro kana tikazvienzanisa ne Photoshop CS3.
Kana ari kupinda pawebhu, hapana dambudziko nekuti tine sarudzo dzakasiyana, Firefox, Chrome, Chromium, Opera, Vivaldi, nezvimwe. Uye pachikamu chekuwanika, hapana zvakawanda zvinonetsa sezvo Flash iri pakafa (saiti inoda kuti iwanikwe) uye Java nekuti iwe unoiisa pasina matambudziko.
Kumubvunzo wekuzorora, kuridza mimhanzi, kwandiri Spotify Unogona kuiisa nenzira dzinoverengeka, sarudzo yangu "snap". Zvemitambo Steam yatove neProton saka mazita eWindows ndinomhanya pasina matambudziko pane system. kunze kwaizvozvo kuenderana neXbox kutonga handina kana dambudziko Sezvo zveXbox One ndine Bluetooth USB 4.0, yeiyo 360 ini ndinogamuchira uye ini zvakare ndine USB control.
Vatyairi veVhidhiyo, yenyaya yangu Nvidia, vadziise mune imwe nyaya yeminiti kubva kuArch Linux repositories.
Kubva ipapo zvichienda mberi Waini yakagadzirisa izvo zvipenga Ndakave, kunyangwe yekuzorora sezvo ini ndichiwanzo ridza Mashiripiti iwe unofanirwa nguva nenguva pakombuta yangu.
Nguva yekuburitsa zvemukati zvemukati ini ndashandisa Clementine yemimhanzi sezvandinowanzo itaira kubva kufoni yangu neayo remote control app. Zvemavhidhiyo ane VLC media player.
Pakupedzisira kuti ndikwanise kugovana mafaera pakati pezvikwata, Ndine server yebasa regore, pcloud, Nemafaira andinoda kugovana nawo nemamwe macomputer ndinongoisa mukati mefaira iro rakabatanidzwa muchirongwa sekunge chimwe chikamu pakombuta.
Kana zviri zvematambudziko auya kwandiri, kusvika parizvino ivo vangove vekupedzisira kweiyo diski kupunzika uko kwakajeka nharaunda kana iyo faira system inozviona seyakaora.
Mhinduro yacho. Ini ndaingofanirwa kumhanyisa faira system uye system block kutarisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Mwedzi mitanhatu neArco Linux, sarudzo yakanakisa yekuyedza Arch Linux uye usafe uchiedza
Salum fab akadaro
Izvo hazvifungidzirwe here kuti chinangwa chekushandisa iyo Rolling-Kuburitsa distro ndeye kungofanirwa kugadzirisa iyo system? pasina kuita kudzoreredza? kana arch haina kuvandudzwa?
Pindura kune fab
Pamwe ndanga ndisingazive maitiro ekutaura ini, asi chaizvo iyo Rolling-Regedza inongogashira inogadziridza, kwete iyo system zvizere sezvazviri semuenzaniso Ubuntu.
Arco Linux, Anarchy Lunux, Edza OS ... Iyo imbwa imwechete ine imwe kora. Sei archlinuxers sekupatsanurwa. Iko kutambisa zviwanikwa. Chinhu chinonyanya kushamisa ndechekuti gare gare ivo vachazivisa aphorism DRY (usazvidzokorore)
Pindura kuna edkalrio
Zvakanaka, linux zvakawandisa zvinotambura nekuparadzaniswa, chinhu chimwe chete chinoitika naDebian, RHEL, Fedora uye Ubuntu nekuti… Pakupedzisira, sarudzo yedistro inopedzisira yave iyo inosangana nezvinodiwa nemushandisi.
Kunze kweizvozvo Arch Linux yakamboshandisa makore mashoma apfuura nekuti shanduro dzeXorg panguva iyoyo dzaive dzisingapindirane nekadhi kangu kemifananidzo, yaive ATI HD 4 ... Panguva iyoyo iyo yega vhezheni yakachengeta rutsigiro yaive Xorg 1.15 uye iyo yakanga ichienderera mberi yaive 1.17.
Iye zvino nekadhi reNvdia ini handina kana matambudziko neiyo Xorg vhezheni, saka ini handina kunge ndave nechidimbu chekushandisa yakachena Arch. Uye kana paine sarudzo dzinokuchengetedza nguva wadii kuzvishandisa.
Vachafona riinhi zvinhu nemazita avo vorega kutaura zvisina musoro? Haisi "kupatsanurwa", ndeyakasiyana sarudzo, mhedzisiro yekukosheswa kweLinux. Kana sarudzo isina vashandisi, poof! zvinongoenda nekufamba kwenguva. Uye kana ikaramba iripo, imo nekuti kune vanhu vanoishandisa uye vanoifarira.
Chii ichi "kubatanidza" zvisina maturo? Kupfuura? Hapana chavakadzidza kubva kuMicro $ kazhinji? Iyo ine zviwanikwa zvakawanda kupfuura ese maLinux akasiyana akaiswa pamwechete, uye iwe unongofanirwa kutarisa iyo "mhando" yeiyo OS yayo. Vanorarama vachingogadzirisa izvo ivo pachavo vanotyora neyakaora uye yekumanikidza kwavo matsva.
Kune rimwe divi, kune mazana emhando dzakasiyana dzeLinux. Uye vanhu vanozvigadzira, zvichienzaniswa neM $, vari kuzviita "pasina kwazvino"! Izvo zviri kutora mukana wezviwanikwa. Asi pano tine "dehenya" iro rinodzokorora semapara ayo vanhu ava vasingazive "manejimendi" zviwanikwa, vanozviparadza. Sei? Nekuti ivo vanogadzira linux musiyano iyo isiri iyo inoshandiswa neaya "maonero evanoona". "Zvino" ndeye "kuonekana."
Sezvandambotaura pakutanga, kana urikushandisa chero Linux, iva nehunhu hwekumira kutaura zvisina basa uye kudaidza zvinhu nezita rako. Kana kana iwe uchida kuramba uchitaura navo, shandisa Wind * ws. Nekuti kushandisa linux uye kuita kushoropodza kwakadaro kwemimwe misiyano inyengeri uye utachiona.
Kwazisai vese :)
Izvo ndezvekuti hapana mutsauko mune iwo ma distros. Iwo anenge ari maonesheni anongokwanisa chete kusunga vashandisi, zvidimbu zvinoitika uye kupatsanura nharaunda pasina chikonzero chine chinangwa.
iyo "mhando" yemahwindo gumi inopfuura amateur distro yakatorwa kubva kuArch kana Debian munenge munzira dzese.
Mukupedzisira, mushandisi weSalient, Arco, Anarchy, kana Endeavor, munguva pfupi inotevera anozoguma aine "weird Arch", zvese nekuda kwekusaziva. Zvinotora 20 min kuisa Arch, uye squid, isingakoshe, kunze kwekurohwa neSvondo.
hafu yeaya pano anofanira kusvetuka sub-mod-forked-altdisters uye kushandisa nguva iyoyo kuverenga zvinyorwa uye wikis. imwe hafu haifanire kunge iri pano, uye nehafu yechitatu yatasara nayo: enda unohwina. osX ndeimwe squid nhasi, pamutengo we octopus,
Ini ndinoshandisa Manjato uye parizvino handina kana dambudziko rimwe chete, muchinyorwa havataure chero chinhu chisina Manjaro.
Vaya devs vanofanirwa kushandisa yavo nguva zvirinani pane kungoda kuve yavo yavo distro.
Nenzira iyo zita racho rakashata uye webhusaiti yako inotyisa. Ndiri kutotya kuidownloader hahaha
Pindura kuna ywy
Ini ndinobvuma, iwe hauna chaungabvunze Manjaro, asi sezvandakataura panguva iyoyo, Manjaro aive nematambudziko asina kugadziriswa, ini handiyeuke kuti ndeapi, asi ini handikanganwe meseji yako mumusoro weforamu yako.
Kana iri yako saiti, inoda kubatwa-kumusoro. Ini pachangu, ini ndinonyatsoda iyo sisitimu maererano nechitarisiko, kunyorera uye marongero.
Mm, ndanga ndichishandisa Manjaro kwenguva yakareba, ini ndakaisa iyo Deepin modhi uye zvinoshamisa, pane zvandinoishandisa.
Asi ndanga ndine dambudziko rekuiisa pane imwe laptop iyo yandakazoisa Linux Mint pa…. Ini ndichaedza kuisa uta pane iyo: D
Ndinoziva kuti haina chekuita netambo yeblog, asi ini ndaida kutaura kuti ini ndaive nedambudziko rakafanana nemawindows XP, zvakatora makore maviri kuzvigadzirisa uye ndakaedza zvisingaverengeke madistros, ndakachinja dhisiki rakaomarara asi iro dambudziko rakaramba riripo, kudzamara ndachinja tambo tambo (idzo dzakachipa kwazvo) uye ndokuenda makore matatu pasina matambudziko.
Ndatenda Xose nekugovana ruzivo rwako naIberdrola. Usakanganwa kuti yero-girini tambo ndeyechokwadi taekwondo bhandi, asi iwe unofanirwa kunyatso chenjera nebhuruu, uye ini handisi kutaura chero chinhu nezve brown zvakare ...
Kunyunyuta pamusoro peAvast kunoti zvigadzirwa zvaro zvinosora mamirioni evashandisi.
Arco Linux Kuisa Nongedzo, YeNewbies